Nezvedu - Shanghai Rainbow Industrial Co, Ltd.
Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd. hwakagadzwa muna 2008, hofisi iri Shanghai, fekitari muna Yuyao, Zhejiang Province, pamwe nyore kutakura kuna Shanghai uye Ningbo gungwa chengarava Tiri nyanzvi kambani iri kuita yakajairwa uye yakagadziriswa epurasitiki package, senge chinokonzeresa sprayer, mapampu, mhute sprayer, plastiki bhodhoro uye yakazara yakanakisa kurongedza mhinduro kwesupamaketi, ganda rekuchengetedza indasitiri, makeup salon, Distributor, wholesaler pasirese. Isu tinopa yepamusoro mhando, yepakati mhando OEM & ODM zvigadzirwa nemutengo unonzwisisika.
Rainbow Package ine yakawanda kwazvo vatengi vakavimbika, vazhinji vanobva kuAmerican, Canada, Europe, Oceania uye East Asia musika. Nepfuma yedu yekutengesa inodhura, mhando yepamusoro zvigadzirwa, sevhisi yepamusoro, pane nguva yekuendesa, isu tine chokwadi chekuti tinogona kuzadzisa zvese zvaunoda uye kupfuudza zvaunotarisira.
Tine nyanzvi R & D timu, anokwanisa vakazvimiririra kugadzira uye kubereka kwedu chakuvhuvhu. Chikwata chedu chakabatsira vatengi munyika dzakawanda kuti vaone maitiro kubva pazano kuenda kune chaicho chigadzirwa.
Rainbow Package ine yechidiki, nyanzvi, timu ine simba, yakazvipira kupa imwechete-yekumira yekuzora pasuru mhinduro kune wese mutengi. Uye gara uchigadzirisa nzira yekutaurirana kusimudzira ruzivo rwevatengi.
Chinhu chakapfuura nenzira yeiyo yenyika inokwanisa chitupa uye yakagamuchirwa zvakanaka muindasitiri yedu huru. Yedu nyanzvi yeinjiniya timu inowanzove yakagadzirira kukushandira iwe kubvunza uye mhinduro. Takakwanisa zvakare kukununura nemasampula-emahara kusangana nema specs ako. Kuedza kwakanaka kunogona kugadzirwa kuti ikupe iwe sevhisi inobatsira uye mhinduro. Unofanira kunge uchifarira kambani yedu nemhinduro, ndapota taura nesu nekutitumira maemail kana kufona isu ipapo ipapo. Kugona kuziva mhinduro uye bhizinesi. ar zvimwe, iwe unozogona kuuya kune yedu fekitori kuti uione.